Zavatra tokony hodinihina rehefa mividy smartphone - Victor Mochere
Asabotsy, Jona 25, 2022
Zavatra tokony hodinihina rehefa mividy finday avo lenta
Fotoana famakiana: 4 mn novakiana
Ny marika finday sasany dia manana sainam-pirenena vaovao toa an'i Google, Apple, ary Samsung. Samy mitady ny hisarika ny saina eny an-tsena izy rehetra. Ireo gadget dia manana safidy avo lenta ihany koa, indrindra amin'ireo finday avo lenta. Ny fifidianana ny finday avo lenta tonga lafatra dia tsy sarotra velively. Smartphone iray mahafinaritra no hitondra anao amin'ireo endri-javatra tsara indrindra, toy ny fakantsary. Tokony havelany hahalala sy hampifaly anao ihany koa izany. Ankoatr'izay, ny vidin'ny smartphone dia tokony hifanaraka amin'ireo endriny. Sarotra aminao matetika ny mahazo maodely handimby anao amin'ny isa rehetra.
Ireto ny antony tokony hodinihina rehefa mividy smartphone.
6. Manorina kalitao
Ny chipset dia manana andraikitra lehibe ilainy amin'ny asan'ny smartphone. Tao anatin'izay taona vitsivitsy lasa izay, tsy niraharaha ny chipset ny olona mihoatra ny fahamaroan'ny famantaranandro sy ny isan'ny core. Androany, nanova zavatra maro ny teknolojia, ao anatin'izany ny chipsets. Misy chipset tsara, ary lafo izany rehefa mividy. Ho an'ny chipsets (antsoina koa hoe System-on-Chips) dia misy zavatra maro hafa ankoatry ny cores CPU sy ny processeur. Izy io koa dia manampy amin'ny famaritana ny fanohanana ny sary, ny famahana ny seho, ny fahaizan'ny fakantsary, ny hafainganam-pandehan'ny bateria, ny fanidiana ny toerana ary ny fifandraisana.
Miaraka amin'ireo finday avo lenta farany farany dia namboarina tamin'ny alàlan'ny SoC tokana sy singa maromaro tafiditra ao anaty puce tokana izy ireo. Ho an'ny ankamaroan'ny finday avo lenta dia mampiasa maritrano CPU izay namboarina tamin'ny fampiasana ARM izy ireo. Ho an'ireo mpanamboatra android, misy chipset finday efatra lehibe: chips an'ny Exynos an'ny Samsung, edisiona Qualcomm's Snapdragon, ary MediaTek (processeur MT sy Helio). Etsy ankilany, Apple dia mampiasa A-series raha Huawei kosa manana chipset Kirin. Isaky ny marika tsirairay dia manana chipset ho an'ny finday avo lenta, salantsalany ary avo lenta izy io.
Ny RAM dia fomba mora iray hafa ahafahanao mijery ny smartphone novidinao. Ny RAM an'ny finday avo lenta dia mitaky lahasa lehibe amin'ny multitasking. Androany, mila sorohinao ireo finday tonga miaraka amina 1GB ho fahatsiarovana ny rafitr'izy ireo. Raha manamarina ao amin'ny midtier ianao, ny smartphone miaraka amin'ny 2GB dia mahazatra ary tsara ampiasaina. Amin'ny ankamaroan'ny fitaovana premium dia ho hitanao fa miorina amina memoara rafitra 4GB izy ireo, ary ho an'ny smartphone ultrapreum dia napetraka amin'ny 6GB izy ireo. Ny gadget hafa dia mandeha avo kokoa, toy ny ahafahanao mahita RAM 8GB na finday avo lenta, indrindra ireo natao hilalaovana.
Amin'izao fotoana izao, saika ny smartphone rehetra dia misy fakan-tsary tsara. Saingy ilaina ny mandinika ireo andinindininy. Noho izany, mila maka sary mahafinaritra ianao; mahazoa smartphone miaraka amin'ny fakantsary tsara indrindra. Miaraka amin'ny fakantsary, aza mifantoka amin'ny megapixels ihany. Tokony kosa hieritreritra ireo toe-javatra hampiasanao ny fakantsary fakan-tsarimihetsika. Raha tsy ny asan'ny sary dia mety ny misafidy fakantsary tokana aorina. Androany, ny fakantsary roa dia lasa mahazatra na dia malefaka kokoa aza izy ireo.
Raha toa ianao ka mila fakantsary izay mitifitra ny haingam-pandeha, dia ilaina ny fitaovana iray izay misy telefona telephoto / sisiny. Ireo fakantsary hafa nosedraina hanomezana endrika anao dia avy amin'ny finday misy fakantsary roa. Mora kokoa ny mifidy telefaona arak'izay mankasitraka anao, miankina amin'ny antsipirian'ny teknika. Raha ny fakantsary miaraka amin'ny megapixels lehibe kokoa sy ny haavo masira kokoa, ny sary marevaka dia ho azonao. Misy hafa manana fitaovana optika fanamafisana (IOS) izay manala ny fikorotanan-tànana voajanahary. Ny fakantsary tahaka izany dia mahatonga anao hahazo sary misimisy kokoa.
Matetika ianao dia mandany fotoana bebe kokoa hijerena ny efijery finday avo lenta. Izany no mahatonga anao mila mifantoka amin'ny iray amin'ny efijery tsara tarehy. Ho an'ny ankamaroan'ny olona, ​​mandinika efijery AMOLED izy ireo satria volamena ho an'ny smartphone mahazatra. Ankoatr'izay, ny efijery toy izany dia manome loko marevaka, zoro mijery malalaka ary mainty lalina. Miaraka amin'ny AMOLED dia haharitra ny androm-piainany satria ny faritra maizina dia tsy mampiseho ny loko mainty.
Ireo efijery LCD, amin'ny lafiny iray, koa dia mahazatra amin'ny fitaovana mora. Kely loatra izy ireo hamokatra. Rehefa eo ambany hazavana mivantana, dia mora mahita ianao satria mihemotra ny tontonana. Tsy isalasalana fa mihamalalaka sy mahazatra koa ireo efijery. Manome anao masam-pandeha lehibe kokoa ny telefaona toy izany raha tsy mahita horonana loatra.
Samy hafa ny finday, marika ary modely. Ny lesoka lehibe indrindra amin'ny telefaona finday dia mifandraika amin'ny marika toy ny bateria tsy fahampian'ny finday, ny fandavana tsy handoa, na mora very aza ny fiampangana azy. Misy marika goavambe izay azo atokisana kokoa noho ny hafa. Ny finday fahita matetika dia gadget avy amin'ny Samsung sy Apple.
Marika marobe sy manaitaitra no tondraka amin'ny tsenan'ny finday. Miaraka amin'ny telefaona Samsung sy Apple, tsy isalasalana fa izy ireo no manjaka. Na dia miaraka amin'ireo finday malaza avy amin'ireo marika ireo aza izy ireo dia tsy ny maodely farany indrindra. Eny an-tsena, marika finday avo lenta maro be no miaraka amina endri-kalitao toy ny Motorola, Huawei, Google, sy ny maro hafa.
Ny kalitaon'ny fananganana dia afaka mamaritra ny famaritana ny fananana smartphone tsara na ratsy. Raha sendra miahiahy momba ny hatsarana ianao, ary manangana kalitao ho an'ny finday avo lenta, misafidiana smartphone na vy na vera. Ny fakana iray izay manolotra ny roa dia tena ilaina ihany koa. Eny an-tsena dia azonao atao ny mahazo handset mora vidy izay feno vatana plastika. Mila misoroka an-dry zareo ianao raha tsy hoe manangona vola.
Ny tombony azo amin'ny fananana finday amam-baravarankely dia ny hanomezana finday tsy raikitra fa diniho ny zavatra atolotra. Ny haino aman-jery sasany sasany dia misy endrika mateza sy tsy azo tanterahina. Ho an'ny telefaona maharitra, tonga miaraka amin'ny mari-pahaizana fanoherana ny rano. Ny hafa dia mihoatra noho ny fanolorana fitaratra fitaratra shatterproof. Ny toy izany dia miaraka amin'ny fampirantiana fitaratra Gorilla. Izy io dia miaro ny telefaona finday.
Raha te hisafidy ny lavorary amin'ny finday tonga lafatra ianao, dia mahasosotra izany. Raha manana ahiahy lehibe momba ny vidin'ny findainao sy laharam-pahamehana ianao, dia dingana izany. Ankoatr'izay, nanjary nifanaraka tamin'ny fahaiza-manao izay manome tombony betsaka amin'ny mpampiasa. Ho sarotra ny handray fanapahan-kevitra tsy mety. Mila maka fotoana ampy ianao, manao fikarohana lalina ary mitady soso-kevitra ihany koa. Ny smartphone tsara dia tokony, ny fifandanjana eo amin'ny vidiny sy ny endri-javatra mahasoa. Noho izany, tokony ho liana amin'ny finday nofidinao ianao.
Sheikhs ambony indrindra manankarena indrindra eto an-tany 10
Royals ambony indrindra 20 eto ambonin'ny tany 2022
Alfred Mwandagha hoy:
May 23, 2020 amin'ny 8: 55 pm
Novakiako ity asanao ity ary tokony hiaiky aho fa nanokatra ny masony izany ary nahatonga ahy hanao fividianana vaovao. Tohizo ho avy ny asa tsara. Araho tsara
Marina Aruka hoy:
May 23, 2020 amin'ny 8: 56 pm
Azo ampiharina sy manampy ary mampahafantatra izany. 👏🏽👏🏽👏🏽
March 19, 2021 amin'ny 4: 21 am
Novakiako ity asanao ity ary tokony hiaiky aho fa nanokatra ny masony izany ary nahatonga ahy hanao fividianana vaovao. Tohizo ho avy ny asa tsara.
Sandile Mnguni hoy:
March 19, 2021 amin'ny 4: 22 am
Fampahalalana tsara Andriamatoa Mochere👏
Ny vola 20 matanjaka indrindra eran-tany 2022